ရခိုင် ကမ်းရိုး တမ်းရှိ မြန်မာ့ ရေတပ် တပ်လှန့် ထား | Freedom News Group
ရခိုင် ကမ်းရိုး တမ်းရှိ မြန်မာ့ ရေတပ် တပ်လှန့် ထား
by FNG on March 16, 2012	ယနေ့မနက် ၁၀ နာရီ စစ်တွေ မြို့ခံ များ ၏ သတင်း ပေး ပို့ ချက် အရ ရခိုင် ပြည်နယ် တွင် အ
အခြေစိုက် သည့် ဓည၀တီ ရေတပ် ကွပ်ကဲ မှု ဌာန ချုပ် လက်အောက်ခံ တပ် များ သည့် အသင့်
အနေ့ အထား ဖြင့် စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု ငယ် တစ်ခု ကို ပြု လုပ် နေကြောင်း FNG မှ သတင်း ရရှိ
အဆို ပါ တပ်လှန့် မှု သည် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ထဲ က ကျွန်းကိုဘင်္ဂလားဒေရှ် ပိုင်စေ ဆိုပြီး
နိုင်ငံ တကာ ပင်လယ်ရေကြောင်း ဆိုင်ရာ တရား ရုံး က အမိန့် ချမှတ် ပြီး နှစ် ရက် အကြာတွင်
မြန်မာ့ တပ်မတော် မှ မျိုးချစ် စိတ် ပြင်းထန် သည့် ထိပ်တန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ် များ က ထို ကျွန်းကို
ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ရေး စီမံ ချက် ရေး ဆွဲ နေသည် ဟု ကာကွယ်ရေး ၀န် ကြီးဌာန မှ ဗိုလ်
မှုး အ ဆင့် ရှိ သူ တစ်ဦး က FNG ကို ပြောသည်။
ရေတပ် နှင့် ကြည်းတပ် အချို့အသင့်ပြင်ထားမှု သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီး
ချုပ် ၏ ညွှန်ကြားချက် ကြောင့် ဖြစ် နိုင်သည် ဟု စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်များ
နှင့် နီးစပ်သည့် သတင်း ရပ်ကွက် က ပြောသည်။
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ပြည်တော်ပြန် ကြသူများ မိန်းမ ယူရန် အတွက် သာ ဖြစ်
Citizen Journalism ဆိုသည်မှာ →
Ko Zay	#
However we are Myanmar! I always respected to U Than Shwe whatever he did.
March 21, 2012	မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု	#
( မြန်မာ့ တပ်မတော် မှ မျိုးချစ် စိတ် ပြင်းထန် သည့် ထိပ်တန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ် များ က ထို ကျွန်းကို
မှုး အ ဆင့် ရှိ သူ တစ်ဦး က FNG ကို ပြောသည်။)
ကာကွယ်ရေး ၀န် ကြီးဌာန မှ ဗိုလ်မှုး အ ဆင့် ရှိ သူ ဆိုတဲ့သတ္တဝါက ဒီကိစ္စကို ( ကုလသမ္မဂ္ဂက ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကို )
မသာအိမ်ဖဲဝိုင်းမှာ ဖဲရှုံးတာ မကျေနပ်လို့ လမ်းကနေစောင့်ပြီးရိုက်တဲ့နည်းနဲ့
ဒို့နိုင်ငံက ဗိုလ်ကြီးတွေ ခြောက်တန်းမအောင်ဘူး ဆိုတာလူတွေသိသွားရင်
March 19, 2012	mr.swan	#
ကချင်ပြည်နယ်ရေလှောင်တမံစီမံကိန်းရယ်၊ကျောက်ဖြူ – စောက်ရုတ် ရေနံပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းတာလောက်ဆိုးမယ်မထင်ပါဘူးဗျာ
March 17, 2012	lin lin aung	#
မြန်မာ့ ရေတပ်စွမ်းရည်က ဘင်္ဂလားနဲ့ ယှဉ်မယ်ဆိုရင် အများကြီးခေတ်နေက်ကျနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ တပ်သားစွမ်းရည်ဘဲဖြစ်ဇြစ် နက်လက်စွမ်းရည်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အဖက်ဖက်က ကျဆင်းနေတယ်။ ဒါကြောင့်သွားတိုက်ယင်လဲ အရှက်ကွဲပြီးရှုံးယုံကလွဲလို့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ။
March 17, 2012	Khin	#
The final conclusion will be more budget for the military please. And we are always essential for that pity country…So boring guys.
March 17, 2012	U Thi Ha Tint Swe	#
Tayoke Ka Phe , Kular ka Il,………………!
March 17, 2012	Pan Ya Moe	#
March 16, 2012	thiha	#
Pan Ya Moe မင်းရော ဘာ တွေလုပ်ခဲ့လို. ၀င် ဟောင်နေတာလဲ။ ဘေးထိုင်မဟောင်နဲ. အလကားကောင်တွေ
March 21, 2012	ရှမ်းပြည်သား	#
တော်ပါ သပ်မဒေါ်ရယ် … သူခိုးပြေးမှ ထိုးဂွင်းထ လုပ်မနေပါနဲ့ ဒင်းတို့ အုပ်ချုပ်လို့ ဆုံးရှုံးတာတွေ များလှပါပြီ …. ခု ကမ္ဘာသိ ဆုံးရှုံးမှုကျမှ ဟန်လာလုပ်နေတယ် … ခွေးသူခိုးတွေ .. အဲဒီလောက်ထိ သိပ်ခံရခက်နေတယ် ဆိုရင်လဲ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဘယ်သူက လုပ်တယ်ဆိုတာကို သိအောင်လုပ် (သိပြီးသားပါလေ) ပြီးတော့ အဲဒီ တရားခံကို ဖမ်း .. ပြည်သူတွေ ရှေ့မှောက်မှာ အရေးယူပြ .. အဲဒီတရားခံ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အကုန်သိမ်း ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာလုပ် .. ဒါမှ အများက ကျေပ်နပ်ကြမှာလေ ..
March 16, 2012	zawmoehetet	#
စောက်ပေါတွေ အခုမှ မျိုးချစ်စိတ်လေး ဘာလေးနဲ့ ။ မင်းအဖေတွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီ ။ ဘာသွားလုပ်အုံးမှာလဲ ။
March 16, 2012	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,777 hits